Sawirro: Kooxo Shiico ah oo xoog ku galay dhismaha Safaaradda Mareykanka ee magaalada Baqdaad.
Tuesday December 31, 2019 - 15:44:04 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Boqolaal qof oo Shiico ah ayaa xoog ku galay dhismaha safaaradda Mareykanka ee magaalada Baqdaad caasimadda wadanka Ciraaq.
Dad caraysan oo isugu jiray maleeshiyaad iyo shacab Shiico ah ayaa gubay dhammaan difaacyadii laga ilaalinayay dhismaha safaaradda kadibna waxay isku dayeen in ay jabiyaan albaabada safaaradda si ay gudaha ugu daataan balse waxay iska caabin kala kulmeen ciidamadii ilaalinayay.
Sawirro lagu baahiyay baraha bulsahda ayaa muujinayay dad caraysan oo udaadanaya gidaarka dhismaha iyo holac ka baxaya dhismayaasha qaar, ciidamo hubeysan oo katirsan xukuumadda Ciraaq ayaa lagu daad gureeyay dhismaha safaaradda si ay dibad baxayaasha ugu diidaan in ay gudaha dhismaha galaan.
Jawaad Alrabiicaawi oo ah hoggaamiye katirsan maleeshiyaadka Xashdiga ayaa sheegay in dadka caraysan ee weeraray dhismaha safaaradda Mareykanka ay dalbanayaan in Mareykanku Ciraaq ka baxo.
Donald Trump oo bartiisa Twitterka qoraal kooban soo dhigay ayaa dowladda Shiicada Iiraan ku eedeeyay in ay mas'uul ka aheyd weerarkii ay dibad baxayaashu ku qaadeen dhismaha safaaradda wadankiisa ee Baqdaad.
Gaari Ciidan oo Arday ku dilay degmada Shangaani ee magaalada Muqdisho.
Wadahadallada Nabadda Afghanistan oo ka furmay magaalada Dooxa.
Madaafiic dhowr ah oo ku hoobtay xaafado katirsan magaalada Muqdisho.
Sawirro: Kumanaan qof Qaxooti ah oo xaaladooda nololeed halis ku jirto.